Đánh giá top 10 sách tiếng Anh cho bé lớp 1 tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đánh giá top 10 sách tiếng Anh cho bé lớp 1 tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Đánh giá top 10 sách tiếng Anh cho bé lớp 1 tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Kunezincwadi eziningi emakethe njengamanje Izincwadi zesiNgisi zezingane zebanga loku-1 ukuthi abazali bangafunda futhi bakhethe. Ngenxa yokuthi izincwadi zihluke kakhulu, abazali abaningi bayazibuza ukuthi yimuphi umkhiqizo okufanele bawukhethe. Nazi iziphakamiso zezincwadi zekhwalithi ezifunwa kakhulu abazali abangabhekisela kuzo.
1 1. Izincwadi eziphezulu zokufunda isiNgisi zabafundi bebanga loku-1
1.1 Funda isiNgisi ngamaDinosaurs ngeBanga 1
1.2 I-Quick Quick Learning Silulumagama sesiNgisi Ngokuphelele ngezihloko zeBanga loku-1
1.4 Umndeni nabangane 1 Incwadi Yokusebenzela
1.5 Umndeni nabangane: Izinga 1: Incwadi Yekilasi
1.6 I-Cambridge English Movers 1
1.7 Izincwadi zezingane ezihlakaniphile
2 2. Indlela yokufundisa isiNgisi ilungele izingane ezifunda ibanga loku-1
2.1 Funda isiNgisi ngokusebenzisa izithombe
2.2 Funda isiNgisi ngezingoma
2.3 Sebenzisa izinto zokufunda esikhundleni sezincwadi zokufunda
2.4 Xhumana nengane yakho
2.5 Ungajahi, ungajahi
2.6 Imiklomelo elengayo yezingane
1. Izincwadi eziphezulu zokufunda isiNgisi zabafundi bebanga loku-1
Njengamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zezincwadi ezivela kubashicileli abahlukene. Ikakhulukazi, kunenqwaba yezincwadi zokufunda isiNgisi zesikole samabanga aphansi. Lokhu kwenza abazali bazibuze ukuthi kufanele yini bathenge incwadi efanele futhi balethe umphumela omuhle kakhulu enganeni yabo. Nazi izincwadi zekhwalithi ezikhethwa abazali abaningi.
Funda isiNgisi ngamaDinosaurs ngeBanga 1
Leli iqoqo lokuqala lezincwadi eVietnam ezibhalwe ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe zabafundi bezikole zamabanga aphansi. Iqoqo lezincwadi ziyizifundo ezidingeka kakhulu zokweseka ulwazi lwesiNgisi ezinganeni zebanga loku-1 ngaphandle kokuya esikhungweni.
Uhlelo lokufunda oluhlelekile ukusuka phansi kuye phezulu, izingane zingathuthukisa isisekelo sohlelo lolimi
Izincwadi zesiNgisi zezingane zebanga loku-1 zihlanganiswa ngokusekelwe ohlakeni lwekharikhulamu yoMnyango Wezemfundo Nokuqeqesha, ngaphezu kwalokho, ibuye inwebe ngokuqukethwe okuwusizo kakhulu.
Siza ingane yakho ukuthi ifunde iphimbo nokuphimisela okulungile kwezikhulumi zomdabu
Izingane zingakwazi ukufunda noma nini, noma kuphi Izifundo ziyathakazelisa, azicindezeli, zivusa isithakazelo ezinganeni
Ngokokuqala ngqa usebenzisa, abazali kudingeka baqondise futhi balandele eduze ukuze bathole imiphumela engcono kakhulu
Intengo: 48,800 VND
I-Quick Quick Learning Silulumagama sesiNgisi Ngokuphelele ngezihloko zeBanga loku-1
I-Quick Quick ibhuku elihle lokufunda isiNgisi labafundi bebanga 1. Ngale ncwadi, ingane yakho ingafunda isiNgisi esijwayelekile ngokuzethemba futhi ithuthukise ibanga layo ekilasini.
Incwadi inamaleveli ukuze izingane zikwazi ukulandela ikharikhulamu futhi zithuthuke. Uhlelo lolwazi luhlangene futhi kulo lonke, izingane zingakwazi ukufunda amazinga aphezulu uma sezifunde kahle emazingeni aphansi.
Izinga ngalinye lizoba nezifundo eziyi-9 ezihambelana nesihloko ngasinye esihlukile. Ngemva kokuqeda izifundo ezi-3, kuba nokubuyekezwa kanye nokuhlola ukuhlanganisa ulwazi. Lena inzuzo evelele yochungechunge lwezincwadi olwaziswa kakhulu abazali abaningi. Lesi sifundo sokuqinisa ulwazi sizosiza abazali babambe ulwazi lwengane yabo ngemva kwesifundo ngasinye.
Imidwebo ehlaba umxhwele, ekhangayo yenza izingane zibe nesithakazelo ezincwadini ngaphandle kokuphoqwa ngabazali ukuba bafunde.
Incwadi inamaleveli amaningi, ngakho abazali kudingeka banqume izinga lokufunda kwengane yabo ukuze bakhethe incwadi efanele.
Intengo: 65,700 VND
I-Let’s Go iyincwadi yesiNgisi yebanga loku-1 ekahle ingane yakho ezoyithanda lapho iqala ukuyibona. Uchungechunge lwezincwadi lunezinga ngalinye ukusuka phezulu kuya phansi futhi izingane zingakwazi ukufunda ngokuphelele ingxenye ngayinye futhi kancane kancane zandise izinga lobunzima bencwadi.
Izincwadi zihlanganiswa ngokwezinga ngalinye, ngakho-ke ingane yakho izofunda inani elifanayo lolwazi
Le ncwadi inemifanekiso ekhangayo, enemibala emihle enohambo oluthakazelisayo, eyenza ikhange. Lo mfanekiso awugcini nje ngokwenza amagama asencwadini aqondeke kalula, kodwa futhi usiza izingane ukuba zijabulele uchungechunge lwezincwadi, udale ugqozi lapho zifunda isiNgisi.
Amagama alula, aqondakala kalula, isembozo sencwadi esiwugqinsi nawo angamaphuzu ahlanganisiwe ethi Masihambe. Ngale nzuzo, izingane zingakwazi ukufunda isiNgisi zodwa kuphela ngezikhathi ezimbalwa zesiqondiso esivela kubazali bazo. Abazali bangakwazi futhi ukwabela izingane zabo umsebenzi wesikole owenzelwa ekhaya ngaphandle kokuqondisa.
Incwadi iza ne-CD ukuze ingane yakho ilalele indaba ngezithombe
Intengo yomkhiqizo iphezulu impela uma iqhathaniswa nezinga lezincwadi zesiNgisi zezingane.
Intengo: 147,000 VND
Umndeni nabangane 1 Incwadi Yokusebenzela
I-Family and Friends iyisifundo esinamaleveli ayisikhombisa esihlinzeka ingane yakho ngohlelo oluphelele lokuqeqeshwa oluhlanganisa ulimi, imisindo kanye nokufundisa ngezinhlamvu. Lena incwadi yesiNgisi ephelele yabafundi bebanga loku-1.
Uhlelo lokuqeqesha lencwadi lugxile ekuphumeni okusebenzayo okukhulunywayo nokubhaliwe.
Lona umbhalo abazali noma othisha abangabhekisela kuwo futhi bawusebenzise ezinganeni
Ngaphezu kolwazi, le ncwadi futhi inezivivinyo zokuzilolonga ngezansi ukuze izingane ziyisebenzise ngokushesha
Le ncwadi ihlanganiswe ukuze ilandele eduze ikharikhulamu yasekilasini. Lesi yisimo esihle sokuthi izingane zikwazi ukusebenzisa imithombo yolwazi emibili ngesikhathi esisodwa.
Le ncwadi ayiphrintiwe ngombala, kulula ukubangela isithukuthezi ezinganeni.
Intengo: 95,000 VND
Umndeni nabangane: Izinga 1: Incwadi Yekilasi
Umndeni nabangane kuhlanganisa kokubili izincwadi nokusekelwa kweDVD. Izingane zingazijwayeza ukusebenzisana ku-inthanethi, zenze izivivinyo futhi zilalele amateyipu ukuze zithuthukise wonke amakhono ama-4 Ukulalela – ukukhuluma – ukufunda – ukubhala. Lena incwadi yesiNgisi yabafundi bebanga loku-1 omama abangeke baziba.
Ikharikhulamu iklanywe kahle futhi kulula ukuyiqonda. Isifundo ngasinye simayelana nesilulumagama, izimo ezihlobene nomndeni, abangani kanye nempilo yansuku zonke. Lokhu kwenza kube lula ngezingane ukusebenzisa ulwazi ezilufundile ekuphileni.
Okuqukethwe yincwadi kufanele iqembu lobudala, kusukela kuhlelo lolimi, ulwazimagama kuye emishweni noma izivivinyo, konke kwenziwe kahle kakhulu. Ingane yakho izothuthuka ngokushesha ngokuzijwayeza okungashintshi.
Isithombe sencwadi sicacile, silungele okuqukethwe, ukuze izingane zikwazi ukuthola ulwazi ngendlela engcono kakhulu. Lena futhi indlela yokuqeqesha ikhono lokucabanga, ukuthuthukisa inkumbulo ngempumelelo.
Leli ithuluzi elihle lokusekela omama ukusiza izingane zabo zifunde isiNgisi ngendlela engcono kakhulu ngaphandle kokuya esikhungweni.
Intengo yencwadi iphezulu impela
Intengo: 170,000 VND
I-Cambridge English Movers 1
Enye incwadi yesiNgisi yezingane ezifunda ibanga loku-1 omama abangacabanga ukuyikhetha i-Cambridge English Movers 1. Le ncwadi ihlatshwa umxhwele kakhulu indlela ebukeka ngayo kanye nemibala ehlukene yezinga ngalinye, ukuze uMama nomntwana babonakale kalula.
Le ncwadi iklanywe ngendlela encomekayo inemibala egqamile, nokuyinto eheha izingane ukuthi zizisize zithande isiNgisi.
Igama ngalinye noma inkhulumomphendvulwano iboniswa ngokucacile ngezithombe ukuze ufinyeleleke kalula
Uma ingane yakho isiyingcweti le ncwadi, ungayiyisa ezingeni eliphezulu ngenye incwadi ohlelweni lwesiNgisi lwe-Cambridge ukuze wenze ukufunda kwengane yakho kungabi nazihibe.
Okuqukethwe yincwadi kuhlanganiswe ngendlela elula neqondakala kalula, abazali nezingane abangayiqonda ngokushesha futhi bazijwayeze.
Intengo yencwadi iphezulu impela uma iqhathaniswa nezinye izincwadi zesiNgisi zezingane zebanga loku-1.
Intengo: 130,000 VND
Izincwadi zezingane ezihlakaniphile
Njengeqoqo lezincwadi zesiNgisi zabafundi besikole samabanga aphansi eVietnam, i-Smart Kids Book ithenjwa abazali abaningi ukuthi bayikhethele izingane zabo.
Incwadi iklanywe ngokwendikimba elandela ikharikhulamu yengane yebanga loku-1 ekilasini. Ngakho-ke izingane zingakwazi ukwengeza futhi zibuyekeze ulwazi kokubili ekhaya nasesikoleni
Incwadi yakhelwe phezu kwesisekelo sokugxila ekuthuthukiseni amakhono ama-3 okulalela – ukubhala – uhlelo lolimi. Siza ingane yakho ikwazi kahle wonke amakhono angu-3, ​​udale isisekelo sezinhlelo zemfundo ephakeme.
Okuqukethwe kusuka kokuyisisekelo kuye kokuphambili, abazali bangakhetha ingxenye ehambisana nezinga lengane.
Indlela yokufunda ikakhulukazi ngezithombe ukusiza izingane zikhumbule ngokushesha futhi zikhumbule isikhathi eside. Ngaphandle kwalokho, le ncwadi futhi inefayela elakhelwe ngaphakathi lekhodi ye-QR yokulalela ukusiza izingane ziphimisele kahle kusukela ekuqaleni.
Izinhlobo ezahlukene zokuzivocavoca zisiza izingane ukuthi zingacikeki.
Ngesikhathi esifanayo, incwadi ngayinye ihambisana nezincazelo ezinemininingwane ukuze abazali baqaphe kalula futhi bahlole izivivinyo zezingane zabo.
Incwadi ayinawo umbala, izingane zidinga ukufaka imibala ngokulandela imiyalelo, ngokomsebenzi ngamunye. Ngakho-ke, lapho uphenya amakhasi ambalwa encwadi, kulula ukuba umntwana azizwe enesizungu.
Intengo: 54,400 VND
2. Indlela yokufundisa isiNgisi ilungele izingane ezifunda ibanga loku-1
Ukufunda isiNgisi kusukela isencane kuzosiza ingane yakho ibe nesisekelo esiqinile sezinhlelo eziphakeme ngokuhamba kwesikhathi. Ezinganeni zebanga loku-1, ukukhetha indlela efanele yokufunda isiNgisi kuzozisiza ukuthi zimunce ngokushesha. Nazi ezinye izindlela ezisebenzayo zokufunda isiNgisi abazali abaningi abazisebenzisayo ezinganeni zabo zebanga loku-1 ongabhekisela kuzo.
Funda isiNgisi ngokusebenzisa izithombe
Izithombe ziyindlela ephumelela kakhulu yokubamba ngekhanda kuzo zonke izifundo, hhayi isiNgisi kuphela. Kusukela ezibalweni, isiVietnam, ukuya emlandweni, igeography yonke ingasebenzisa le ndlela. Ikakhulukazi ezincwadini zesiNgisi zezingane zebanga loku-1, umenzi usebenzisa izithombe eziningi ukuze asize izingane zibone ngeso lengqondo kalula.
Bazali, sicela nizilolonge ukuze izingane zizihlanganise nezithombe ngaphandle kokucabanga ngamagama esiVietnam. Ungagxili ulwazi oluningi ngesikhathi esifanayo, lokhu kuzofaka ingcindezi futhi kwenze ingane yakho ikhathale.Kanye nokufunda isilulumagama, gxila ekubizeni amagama. Ungathengela ingane yakho izincwadi, noma amakhadi emakhadi ahlanganiswe nezithombe ukuze ushintshe indlela yokufunda futhi ukhulise intshisekelo yezifundo.
Funda isiNgisi ngezingoma
Ngaphandle kwezithombe, umsindo uwumzila owamukela kakhulu omama abangawusebenzisa ezinganeni zabo. Izingoma ezilula, ezingokwemvelo, neziqondakala kalula ziyinketho yokuqala. Ungadlala izingoma zesiNgisi nsuku zonke ukuze ingane yakho ilalele nje. Ngemva kwesikhashana, ingane yakho izofunda ngokushesha ulwazimagama ngezihloko ezahlukene.
Lena indlela ephumelela kakhulu yokufunda isiNgisi izikhungo kanye nothisha abavame ukusifaka kubafundi babo.
Sebenzisa izinto zokufunda esikhundleni sezincwadi zokufunda
Ukusebenza kanzima kuphela ukuze ufundise ngokwekharikhulamu kuyokwenza ikhono lengane nekhono lokusungula lilinganiselwe ngandlela-thile. Kufanele usebenzise izindlela zokufundisa ngezinto zokufunda ezifana nemidlalo, izingoma, imidlalo, njll. Ukwenza izitikha, amamodeli, noma ukudweba izithombe zesiNgisi nengane yakho nakho kuyindlela ephumelelayo yokukhuluma nesiNgisi. Ukukhetha indlela yokufunda kubalulekile, kodwa okubaluleke kakhulu, abazali kufanele bahlale bekhona ukuze babakhuthaze ukuba babasize banqobe isiNgisi.
Xhumana nengane yakho
Abazali abaningi abasazi kahle isiNgisi kodwa basazama ukufunda isiNgisi nsuku zonke ukuze bakwazi ukuxhumana nezingane zabo. Lokhu kuzosiza ukuqeqesha ingqondo yesiNgisi yengane yakho. Kuyasiza futhi ekuxhumaneni komndeni. Esikhundleni sokubuza ingane yakho ukuthi “What is this?”, kufanele ngaso sonke isikhathi esikhundleni sayo ufake isiNgisi esithi “What is this?”.
Ukufunda nokujwayela isiNgisi kuyinqubo ende, edinga ukubekezela. Kusukela ezifundweni zokuqala, bobabili abazali nezingane kufanele bathathe ngokungathi sína ukuqonda ulwazi oluyisisekelo futhi kancane kancane bandise ubunzima. Izingane ngeke zilunge ngokushesha ngemva kwencwadi eyodwa nje. Ngakho-ke, abazali kufanele basekele izingane zabo ukuze zifanelekele ukufunda isiNgisi kusukela zisencane.
Imiklomelo elengayo yezingane
Ngengane eziphethe kahle, kufanele ulengise umklomelo njalo lapho ingane yakho iqeda umsebenzi othile ngamaphuzu aphezulu noma ithuthuka uma iqhathaniswa nangaphambili. Imiklomelo kufanele ibe kuphela izinto ingane yakho ezifisa isikhathi eside noma izinto ezincane ezifana namathoyizi amasethi, amaphakheji amakhekhe, ukuya kumabhayisikobho… Ngokuqinisekile lokho kuyoba umthombo wesikhuthazo kumntwana ukuba aqhubeke ezama futhi elwela okwengeziwe. .futhi.
Nazi izincwadi Izincwadi zesiNgisi zezingane zebanga loku-1 Okuphumelela kakhulu abazali abangabhekisela kukho. Sethemba ukuthi ingane yakho izoba nezikhathi zokufunda ezijabulisa kakhulu!
Xem Thêm MangaToon là gì? Cách đọc truyện tranh trên MangaToon | Muasalebang
Loa Sony SRS-XB41 | Giá Rẻ. Ưu đãi hấp dẫn. Trả Góp 0% | Muasalebang
Top 5 điện thoại Xiaomi bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2021 | Muasalebang